जन्मदिनमा ‘फ्यान–फलोअर्स’का लागि शुशिलाको यस्तो उपहार ! हेर्नुहोस् भिडियो - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper
जन्मदिनमा ‘फ्यान–फलोअर्स’का लागि शुशिलाको यस्तो उपहार ! हेर्नुहोस् भिडियो
फागुन १३, काठमाडौं । छोटो समयमा चर्चाको शिखरमा पुगेर सांगीतिक क्षेत्रमा तहल्का मच्याउन सफल गायिका शुशिला पाठकले आज जन्मदिन मनाएकी छिन् । अहिले आफुलाई सांगीतिक क्षेत्रमा अब्बल गायिका बनाउने दौडमा रहेकी गायिकाले जन्मदिनको अवसर पारेर आफ्ना फ्यान फलोअर्स र शुभेच्छुकका लागि उपहार भन्दै आफ्नै स्वर तथा अभिनय रहेको म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक गरेकी छिन् ।
संगीत तथा पत्रकारिता क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तित्वहरु लगायत परिवार र नजिकका साथीभाईहरुको उपस्थितिमा गायिका शुशिलाले केक पनि काटेकी थिइन् । शुशिलालाई उनका गुरु तथा बरिष्ठ संगीतकार शिलाबहादुर मोक्तानले बधाई तथा शुभकामना मन्तव्य दिएका थिए ।